Madaxweyne kuxigeenka Puntland Oo Qaabishey Wafuud Heer Caalami Ah – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Oo Qaabishey Wafuud Heer Caalami Ah
Madaxweyne kuxigeenka Maamul Goboleedka Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey ayaa saakay subax nimadii
qasriga Madaxtooyada Garoowe ku qaabilay madaxa xafiiska UNOCHA ee Soomaaliya Mr. Justin Brady oo uu wehelinayo madaxa xafiiska UNOCHA ee Puntland Mr. Francis Lenoh.
Kusimaha Madaxweynaha iyo madaxda ka socotey hay’adda UNOCHA ayaa waxa ay kawada hadleen wadashaqayntii wanaagsanayd ee dhex martay Puntland iyo hay’adda UNOCHA xiligi abaaraha baaxadale ay ka jireen Puntland.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa ku amaanay hay’adda UNOCHA doorkii wanaagsanaa ee ay ka qaateen gurmadka loo fidinaayey dadka Soomaaliyeed ee abaartu saamaysay xiliyadii adkaa ee abaartu ka jirtey degaanada Puntland, waxaana uu xaqiijiyey in hay’adda UNOCHA ay ka mid tahay hay’addaha ugu wax qabadka wanaagsan ee ka hawl gala Soomaaliya.
Mr. Justin Brady madaxa xafiiska UNOCHA ee Soomaaliya ayaa dhankiisa ku dheeraday muhiimada ay u leedahay tageerida iyo gacan qabashada dadka dhibaataysan ee reer Puntland, isagoona If you don’t want to spend a pretty penny for your Temovate, just buy it right now for 33.69 USD only! xaqiijiyey inay markasta diyaar u yihiin ka qayb qaadashada xaalad kasta oo taagan, waxaana uu ku amaanay Puntland iyo shacabkeeda shaqo wanaaga ay ku astaysan yihiin iyo caawinta midba midka kale ula heelan yahay.